Ahrefs weputara ulo oru nyocha ohuru nke saịtị | Martech Zone
Dịka onye na-ahụ maka ndụmọdụ SEO, anwalela m ma jiri ya rụọ ọrụ ọ bụla n'ahịa. N'ihe niile n'eziokwu, enwere m okwukwe na ọtụtụ ikpo okwu ndị na-adịghị mma bụ ndị bụ ndị na-eme mkpọtụ ka a gbakọtara n'otu ngwaọrụ nke ndị na-ere ahịa na-akpọ ịkpọ nyocha SEO.
M kpọrọ ha asị nke ukwuu.
Ndị ahịa ga-anwale otu oge wee kwupụta nke abụọ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ anyị na-arụ iji weghachite saịtị ha na ahụike - na-eleghara na ngwa ọrụ ha ji mee ihe sitere na ihe ndị furu efu afọ iri gara aga. Onwe m, m na-eji nchikota nke ngwaọrụ dị n'ịntanetị, nyocha, ndị na-agba ịnyịnya snippet bara ụba, webmasters, ule ọsọ ọsọ, ndị na-agagharị agagharị, nyocha usoro njem aka, na igwu ala na templating saịtị iji dozie nsogbu.
Kwa afọ, mmetụta nke nsogbu metụtara algorithms ọchụchọ na-aga n'ihu na-agbanwe - mana n'ihi ihe ụfọdụ, ngwaọrụ nyocha ndị ahụ adịkarịghị. Na, oge na-aga, m ga-asị na SEO ọkachamara n'ezie na-achọ a ngwaọrụ ahụike karia inyocha ihe nke SEO nke mgbe ochie. Nyochaa nke na-enye ọtụtụ ngwaọrụ ka ndị ọkachamara wee lekwasị anya na mpaghara ha na-eche.
Ngwaọrụ ahụ dị ugbu a na Ahrefs ọhụrụ Nnyocha saịtị ngwaọrụ.
Search engines na-eji ihe karịrị 200 dị iche iche ogo ihe iji nweta gị na ebe nrụọrụ weebụ na-ekpebi ma ọ bụrụ na o kwesịrị ịkwado elu ke nsonaazụ ọchụchọ. N'iji ọtụtụ ihe ị ga-atụle, ọtụtụ weebụsaịtị na-eleghara ọtụtụ okwu SEO dị na teknụzụ na ọtụtụ omume kachasị mma nke na-egbochi ha ịnweta okporo ụzọ site na ọchụchọ.
The ọhụrụ Ngwaọrụ Nyocha saịtị site na Ahrefs ga-awaba na ebe nrụọrụ weebụ gị niile ma mepụta akụkọ dịgasị iche iche nke ga - enyere gị aka nyochaa ahụike nke weebụsaịtị gị ma dozie nsogbu niile ị nwere ike ịnweta. You nwere ike ilekwasị anya ugbu a n'ihe ị ghọtara dị ka akụkụ dị egwu nke saịtị ahụ karịa ịnwe usoro nke ga-agwa gị.
Ahrefs 'Site Audit tool bụ naanị otu n'ime ngwa ọrụ ha - nke gunyere ngwaọrụ maka nyocha asọmpi, nyocha isiokwu, nchọpụta backlink, nyocha ọdịnaya, nyocha ọkwa, yana nyocha weebụ.
Tags: ahrefsngwá ọrụ nyochanyocha backlinknyocha asọmpinyocha ọdịnayannyocha nyochansuso n'usoroseo ngwá ọrụseo ngwaọrụoditiOnye nyocha saịtịahụike saịtịnlekota oru web